လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စများ ပြည်ထဲရေးသို့ တိုင်ကြားနိုင် | ဧရာဝတီ
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကိစ္စများ ပြည်ထဲရေးသို့ တိုင်ကြားနိုင်
ဧရာဝတီ| November 30, 2012 | Hits:146
3 | | လာဘ်လာဘ်ယူ ကိစ္စများ ဆက်လက်ရှိနေသေးကြောင်း သိရသဖြင့် ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆက်သွယ်တိုင်ကြားရမည့် လိပ်စာများကို ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနက ယနေ့အစိုးရ သတင်းစားများတွင် ထည့်သွင်းကြေညာထားသည်။ တိုင်ကြားရာတွင် အထောက်အထား၊ အချက်အလက် ပြည့်စုံရမည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး တိုင်ကြားရမည့်သူများမှာ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန (စသုံးလုံး) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအဖွဲ့မှူးတို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ယင့်လပ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့မည်
NLD နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် တွေ့
ရခိုင် ပဋိပက္ခ ဒုက္ခသည် ၃၂၀၀၀ ကျော် ရှိ
“၀” ပြည်နယ် အသိအမှတ်ပြုရန် တောင်ကြီးဆွေးနွေးပွဲတွင် ထပ်မံတောင်းဆို
6 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Websiteုkolattkklphado November 30, 2012 - 8:45 pm	ကျနော်တို့ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ကန်ကလေးမှာ လူကုန်ကူးမှုဖြစ်နေတယ်လေ၊အမှုကိုတရားရုံးတင်တာ
သက်ဆိုင်ရာ ရဲနဲ့ဥပဒေအရာ၇ှိတို့က အဓိကတရားခံကို
Reply	ပြည်ထဲရေး December 1, 2012 - 11:46 am	တကယ်ပြောတာပါ။ ပြည်သူတွေက လာဘ်လာဘ်ယူကိစ္စများ ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကို လာသာတိုင်လှည့်ပါ။ တိုင်ဖို့ကခင်ဗျားတို့အလုပ်။ အရေးယူဖို့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်ပါ။ အရေးမယူဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ အလုပ်ပါပဲ။ ငှဲငှဲငှဲ…..။
Reply	Ngal Hriang December 1, 2012 - 3:03 pm	Do the people need to bribe you first? Talk is cheap. Action speaks louder than word. Ne Win also said that. Than Shwe also said that. The people who report to the government might get counter attack if the corrupt person is well connected to the authority.
Reply	james December 1, 2012 - 10:31 pm	စသုံးလုံးက..လဘ်စားတာကို…ဘယ်သူ့ဆီတိုင်၇မလဲ…..
Reply	james December 1, 2012 - 10:38 pm	၇ခိုင်အေ၇းအခင်းမှာ…..နစက..အောင်ကြီးကို…ဘယ်လိုများအေ၇းယူခဲ့ပါသလဲ…၅လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုကကော….ဘယ်လိုအခြအနေေ၇ာက်နေပြီလဲ….
Reply	james December 1, 2012 - 10:41 pm	မတိုင်တော့ပါဘူး..ကိုယ်ထက်ပိုပေးနှုင်တဲ့သူတွေရှိနေလို့…အမှုမှန်လဲပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး